China အရေပြားစောင့်ရှောက်ရေးစက္ကူဘူးသည် PVC စာအုပ်အမျိုးအစားသေတ္တာထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်အတူထည့်သွင်းထားသည် Huaguang
အရွယ်အစား: 28 * 17 * 7cm
နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများဖြင့်လက်ဆောင်သေတ္တာထုပ်ပိုးခြင်း၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသည်လုပ်ငန်းများကိုပိုမိုများပြားလာသည်။ နည်းပညာသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေပြီးစက်ကိရိယာအသစ်များသည်ငွီးငှေ့ဖွယ်လက်စွဲဖြင့်လည်ပတ်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းအစားထိုးလိုက်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲများ၏အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်
လက်ဆောင်သေတ္တာအမျိုးအစားအားလုံးမှဖွဲ့စည်းပုံမှအပေါ်နှင့်အောက်အဖုံးနှင့်အဖုံးများပုံစံပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအရာတစ်ခုမှအရာတစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ တံခါးပေါက်အမျိုးအစားဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအကြောင်းစာအုပ်၊ လက်ဆောင်သေတ္တာများ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ၊ အခြေခံဘောင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင်ဤပုံစံများသည်ဒီဇိုင်းသမားများသည်နာမည်ကောင်းထည့်ထားသောထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးရန်အတွက် box type အမျိုးအစား kaleidoscope ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဒီအသားအရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစက္ကူစာအုပ်အမျိုးအစား box မှတစ်ဆင့်သင့်ကို box ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
၁။ Book type box - အပြင်ဘက်အခွံနှင့်အတွင်းပိုင်းသေတ္တာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အတွင်းအခွံလက်စွပ်သည်အတွင်းပိုင်းသေတ္တာပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိပြီးအတွင်းအကွက်၏အောက်ခြေကိုနောက်ကျောနံရံတွင်ကပ်ထားသည်။ အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုစက္ကူစာအုပ်အမျိုးအစားသေတ္တာကဲ့သို့ပင်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
၂။ အဖုံးနှင့်အောက်ခြေသေတ္တာ - ၎င်းသည်အဖုံးနှင့်အောက်ခြေသေတ္တာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
(၃) ouble door box - ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်ညာဘက်အခြမ်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အတွင်းဘက်တွင်အတွင်းဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်အပြင်ဘက်အကွက်များဖြစ်သည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
(၄) နှလုံးပုံသဏ္boxesာန်သေတ္တာများ - သေတ္တာများသည်နှလုံးသားနှင့်တူသည်။ အများအားဖြင့်အဖုံးနှင့်အောက်ခံအဖုံးများပါရှိသည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
၅။ အစွန်းနှင့်အောက်ဘက်ရှိအဖုံး - အဖုံးအကွက်နှင့်အောက်ထောင့်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Cover box နဲ့အောက်ထောင့်ကအရွယ်အစားတူတူပဲ။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
၆။ အံဆွဲ box - ၎င်းသည်အံဆွဲ function ပါသည့် box တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုထုတ်သောအခါလွယ်ကူစွာဖွင့်နိုင်သည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
၇။ သားရေဘူး - သားရေသေတ္တာနှင့်တူသည့်အပြင်ဘက်တွင်ကပ်ထားသည့် PU ပစ္စည်းပါ ၀ င်သောသိပ်သည်းဆဘုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသေတ္တာတစ်လုံး။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
၈။ Round Box - သေတ္တာပုံစံသည်လုံးဝပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်ဘဲဥပုံဖြစ်ပြီးအများစုမှာအဖုံးနှင့်အောက်ခံအဖုံးပုံစံရှိသည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
၉။ ဆx္ဌဂံ / အ္ဂံဂံ / အနားရှိသေတ္တာ - သေတ္တာသည်ပုံသဏ္heာန်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့်အဖုံးနှင့်အခြေခံအဖုံးများဖြစ်သည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
၁၀။ ဝင်းဒိုးဖွင့်လှစ်သောသေတ္တာ - သေတ္တာတစ်ဖက် (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောတံခါးများကိုဖွင့်သင့်သည်၊ ပေနှင့်အခြားပစ္စည်းများပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်အတွင်းဘက်၌ကပ်ထားသင့်သည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
၁၁။ သန့်စင်သောသစ်သားသေတ္တာ - စင်ကြယ်သောအစိုင်အခဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသေတ္တာများ၊ အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုအများအားဖြင့်သုတ်လိမ်းထားသောသေတ္တာများနှင့်အချို့သောသေတ္တာများမှာအရောင်မပါဘဲ။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
12. Folding box - မီးခိုးရောင်ပန်းကန်လုံး၊ အရောင်ခြယ်ထားသောပန်းချီ၊ ပန်းချီစက္ကူနှင့်အတူစက္ကူသို့မဟုတ်အခြားစက္ကူများ၊ အကွာအဝေးအကွာအဝေးတစ်ခုမှထွက်ခွာရန်မီးခိုးရောင်ပန်းကန်များကိုကွေးခြင်း။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
13. Flip box - ၎င်းသည်အဖုံးနှင့်အခြေခံအဖုံးပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အစွန်းအဖုံးနှင့်အခြေခံအဖုံးထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ခြားနားချက်မှာသေတ္တာ၏နောက်ကျောကိုတစ်ရှူးစက္ကူဖြင့်ကပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလွတ်လပ်စွာရှေ့သို့လှည့်နိုင်သည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ)
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်အရောင်ခြယ်ထားသောကော်ဖီ ၃၅၀ ဂရမ်အဖြူရောင်ကဒ်ပြားစက္ကူအပြင်ဘက်သေတ္တာ
အဖုံးစက္ကူလက်ဆောင်ထုပ်ပိုး cosm နှင့်အတူအသားအရေထိန်းသိမ်းမှု box ကို ...
Custom logo လက်လုပ်ဇိမ်ခံစက္ကူလက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာ
အရည်အသွေးမြင့်တစ်ခါသုံးစိတ်ကြိုက်ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် box / cup / ...
ပုံနှိပ်ထားသော Logo Cardboard Custom Cosmetics မိတ်ကပ် ...